Food News Archives - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
အွန်လိုင်းပေါ် နာမည်ကြီးနေသည့် ၈ နှစ်သမီးအချက်အပြုတ်မင်းသမီးလေး(ရုပ်သံ)
အသက် ၈ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးပေမယ့် ဟင်းအမျိုးအစား အစုံချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ သမီး ငယ်လေးတယောက်ဟာ အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ရေပန်းစားနေပါတယ်။ သူကတော့ သိပ်မကြာခင်ကမှ အိမ်ထောင်ရှင် မယ်စကြဝဠာအလှမယ်ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့တဲ့ အလှမယ် ဟန်နီချိုရဲ့ သမီးငယ်လေး မိုးမြင့်မေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်တဲ့ ဟန်နီချိုဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်က ကျင်းပခဲ့တဲ့
ပြည်တွင်းစားသုံးရန် ဆန်လုံ လောက်ရုံတင်မက အပိုအလျှံပင်ရှိ ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်း ချုပ်က မတ် ၁၃ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က COVID-19ကို ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ အဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာ အသုံးအဆောင်များ ဝယ်ယူစုဆောင်း မှုပြုလုပ်လျက်ရှိသဖြင့် စိုးရိမ်မှုမရှိ စေရန် ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ကောလဟာလထုတ်လွှင့်တဲ့ ဝိသမလောဘသားတွေကြောင့် ပြည်သူတွေစိတ်မပူဖို့ အိမ်ထောင်စု၅သိန်း တလစာ ဆန်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ ဧရာမင်းသားလုပ်ငန်းအုပ်စု။ မနေ့က ဝူဟန်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါနှင့် နွှယ်ပြီး အွန်လိုင်းမီဒီယာတခုနဲ့ချိတ်ဆက်ကာ ကောလဟာလထုတ် မိမိရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက် ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းထွက်ဖို့ ပြည်သူတွေကို ဂျင်းထည့်လိုက်တဲ့ စီးတီးမတ်တခုနဲ့ အွန်လိုင်းမီဒီယာတခုရဲ့ ဆက်စပ်ပုံကို အားလုံးလည်း သတိထားမိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီအချိန် တောမီးလောင် တောင်ကြောင်လက်ခမောင်းခပ် ဆိုသလို ဝိသမလောဘသားတွေ
Six fish prawns in Khin UM market
Officials conducted an inspection of the sixth grade fish market in Khin Oo market in Shwebo District today. Townships, Consumer Affairs, Township Health Department; The police and the
“The bridge is kennel, medicine is still there Kung fu and white lime Russia It’s just blurry. ” Prince U Min For video viewing It is made of